Panama: Ny Vondron’ny Indizena Kuna Sy Ny Fampiasàna Ny Teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2018 12:52 GMT
Tena fotoan-dehibe ny nahafantarako an'i Gilberto Alemancia sy ny fandraisany anjara lalina tao amin'ny indostrian'ny fizahantany Panameana amin'ny maha-mpitaridia miteny fitenim-pirenena maro azy ao amin'ny faritra indizenin'ny ala mando panameàna, ary indrindra amin'ny asany mareva-doko hatrizay tamin'ny fipihana sary ny natiora sy ny olona amin'ny fakàntsary dizitaly.
Mpanolotsaina miasa tena amin'ny fizahantany mikajy ny tontolo iainana i Gilberto Alemancia – mpanolotsaina amin'ireo fandaharanasa isankarazany momba ny fizahantany mikajy ny tontolo iainana ao amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny any Amerika Afovoany, Azia ary Panama ihany koa izy. Nanao famelabelaran-kevitra momba ny fizahantany mikajy ny tontolo iainana, ny fiarovana sy ny kolontsaina tany amin'ireo oniversite manerana an'i Amerika Afovoany sy Atsimo, Azia ary Eoropa izy. Noresahany tao amin'ny Gazetiboky Outside sy National Geographic ihany koa ny amin'ireo fihaonambe iraisam-pirenena samihafa momba ny fizahantany mikajy ny tontolo iainana. (avy amin'ny Pilotguides.com).
Iray amin'ireo zavatra nolazainy voalohany fony izahay vao niresaka voalohany tamin'ny imailaka dia ny hoe avy amin'ny vondrom-poko Kuna no niaviany. Avy eo, notohizany ary nolazainy indray tao amin'ny imailaka hafa izany, na dia tsy nanontaniako aza. Gaga aho tamin'izay fotoana izay ary nanontany tena, “… hay, angamba olona niaina ny fanamelohana ny kolontsaina izay manamarika ireo taranaka indizeny ato amin'ny firenenay izy nandritra ny androm-piainany taloha. Na tsy izany, … mety ho tena olona iray mirehareha fotsiny izy.”
Rehefa izay, dia tsapako fa rohy tsy ampy izay efa notadiaviko hatry ny ela no teo anoloako : olona mahalala ireo vondrona indizena maro samihafa ato amin'ny firenenay sy ny fomba fiteniny, miaraka amin'ny fahafahana mizara sy liana hampianatra ny azy. Nanomboka nametra-panontaniana aho, izany no vintako … Ela ny ela!
Melissa De León: Raha amin'ny fomba fijery ara-kolontsaina, ahoana no fahitanao ny fiantraikan'ny teknolojia sy ny aterineto amin'ny foko Kuna ?
Gilberto Alemancia: Mampalahelo ny milaza fa tsy mbola tafiditry teknolojia mihitsy any amin'ireo nosy Kuna Yala amin'izao fotoana izao. Tsy misy aterineto azo ampiasaina any Comarca Kuna Yala, nefa mandady manerana ireo nosy ny tariby mpampita hafatra ambany ranomasina izay manome sehatra ho an'ny fotodrafitrasa goavana mahatonga an'i Panama ho mpifaninana lehibe amin'ny fampiasàna ny fifandraisandavitra amin'ny resaka tolotra lôjistika, tetikasa novokarin'ny Cable & Wireless Panama ary vola novatsian'ny ARCOS (Rafitra Faribolan'ny faritra Karaiba any Amerika ). Tsy vitan'ireo Kuna caciques ( ireo mpitarika) sy ny Kongresy jeneralin'ny Kuna ny nampiditra tao amin'ilay fifanarahana nosoniavina tamin'ny aprily 2001 hoe tokony hamatsy aterineto any amin'ireo nosy Kuna sy ny vahoakany ny Cable and Wireless. Fantatro fa tena ilaina amin'ny fanabeazana ny teknolojia sady afaka manampy antsika hahafantatra ireo zavatra hafa momba ireo kolotsaina sy ireo fomba amam-panaontsika. Ankehitriny, ny Cable and Wireless ihany no mandoa isambolana ny sarany amin'ny fandalovan'ilay tady mpampita hafatra ambany ranomasina ampiasaina any amin'ny tanin'ny Kuna Yala, fa tsy izany ihany. Fantatro fa io Kaompania io (Cable & Wireless) dia miresaka mandrakariva ny momba ny fanohanana ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny teknolojia, saingy angamba any an-tanàndehibe, satria tena samihafa tanteraka ny tantara any amin'ireo nosinay.
MD: Inona no nanosika anao hianatra momba ny sary ? taiza ianao no nianatra izany ?
GA: Raha lazaiko anao ny marina, tsy mbola nianatra momba ny fangalàna sary mihitsy aho. Teo amin'ny sahan'ny Fizahantany sy ny Fialàmboly ny asako, fa valo taona lasa izay dia nanomboka nikarakara fitsangatsanganana fipihana sary taty Panama izahay niaraka tamina namana tena tsara iray avy any New York, Rick Sammon, izay manoratra ho an'ny Fikambanan'ny gazety sady mpanoratra boky folo mikasika ny sary dizitaly. Tena nahaliana be ahy ny nahita azy nipika sary ny natiora sy ny olona, dia mba nanomboka nikarakara fitsidihana fipihana sary ivelan'i Panama niaraka tamin'ireo mpaka sary iraisam-pirenena malaza aho. Ary tamin'izany fotoana izany no nianarako ny atrikasany. Fialàm-boly ho ahy izany, saingy ny sasany amin'ireo sary nalaiko ireo dia any amin'ny gazetibokin'i Panama ary manerantany dia navoaka tamin'ny gazety toy ny Iris Time, Outside Magazine, Native Peoples, Island Magazine. Tena zava-dehibe tokoa ny fanoloranay fanomezana isaky ny ezaka fampianarana momba ny sary omana an'ireo olona ao anatin'ny vondron'ny indizeny izay tsidihinay .
Kuna Yala (Kunas), Darien (Embera y Wounaan) ary ny Ngobe Bugles no notsidihanay tamin'ilay fitsangatsanganana pika sary. Tsikaritro fa te-hianatra sy angamba hiasa amin'ity sehatra ity ny tanora , saingy lafo ny fakàntsary dizitaly. Mampianatra an-dry zareo izahay, satria ny ataonay dia solom-pampianarana, ary satria tsara ho azy ireo izany no sady fomba anehoana amin'izao tontolo izao ny momba ny kolontsaina sy ny fomba amam-panaonay. .
Sary nahazoana alàlana : Ny sary rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'i Gilberto Alemancia ary nahazoana alàlana. Tsy azo adika raha tsy nomen'ny mpanoratra alàlana.
Mbola mangetaheta ? … hay, tsy maintsy hitsidika ny Flickr-ny ianao !